फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्दै ओली सरकार ! के मार्क जुकर्बर्ग अनुमति माग्न नेपाल आउलान् ? - फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्दै ओली सरकार ! के मार्क जुकर्बर्ग अनुमति माग्न नेपाल आउलान् ?
२०७५, ३ फाल्गुन, 03:23:30 PM
काठमाडौं । नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहले सामाजिक सञ्जाल फेसवुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो । गृहले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । के मार्क जुकर्बर्ग फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्न नेपाल आउलान् ? अनि के भारतमा विवादमा परेका ज्याक डोर्सी ट्विटर दर्ता गर्न काठमाडौं आउलान् त ?
सामाजिक सञ्जाल चलाउन नेपालमै दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भएको एउटा विधेयक सरकारले बिहीवार संसद्‌मा दर्ता गरेपछि यी प्रश्न उठेका हुन्। सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायमा दर्ताा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
यथास्थितिमा सो विधेयक अनुमोदित भएमा तोकिएको मितिमा दर्ता नगरिएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लाग्न सक्छ। सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर ल्याउन लागिएको उक्त कानुनमा सरकारले चाहेको खण्डमा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयवस्तु र सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। नेपालमा फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल लोकप्रिय छन्। भिडिओ शेयरिङ वेब्साइट युट्युबपनि धेरैले प्रयोग गर्छन्।